HARGEYSA, Somaliland – Golaha Wasiiradda Somaliland oo kulan ku yeeshay Hargeysa ayaa maanta oo Khamiis ah waxay soo saareen go'aano cusub oo la xiriira ka hortagga caabuqa Coronavirus.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa guddoomiyey shirka. Sawirro laga soo qaadey kulanka wuxuu muujiyey wasiirada oo aad u kala fog, talaabadaas oo qeyb ka ah xakameynta fayruskaas.
Go'aanada kasoo baxay shirka waxaa qeyb ka ahaa in wasiiradu ay mushaharkooda hal bil ugu deeqeen ololaha looga hortagayo xanuunkaas dilaaga ah isla markaana galaaftay kumanaan kun.
Hoos ka akhriso go'aanadda
1. In guddidii ka hortaga xanuunka Coronavirus lagu xoojiyo madaxweyne ku xigeen Somaliland iyo wasiirka horumarinta maaliyada, waxaana guddidaasi laga bilaabo maanta gudoomin doona madaxweyne ku xigeenka.
Somaliland ayaa mar sii horeysay xaqiijisay in ay qabatay in ka badan 20 ruux, kuwaasoo looga shakisan yahay cudurka COVID—19, wallow aysan dhamaantooda ka muuqan astaamaha, sidda la sheegay.
Sagaal xaaladood oo caabuqaas ah ayaa laga diiwaan-geliyey degaanada maamulkaas.